Himalaya Dainik » नचिनेको हेमा ओझा शिल्पा को फेसबुकमा साथी कसरि बनिन् ?
नचिनेको हेमा ओझा शिल्पा को फेसबुकमा साथी कसरि बनिन् ?
नायिका शिल्पा पोख्रेल र उनका श्रीमान् निर्माता छबिराज ओझा जेठी श्रीमती हेमा ओझाले अहिले बहुबिबाहको उजुरी हालेको छ । धरानमा बस्ने हेमाले छवि र शिल्पाको आन्तरिक झगडाको चर्चा र डिभोर्सको प्रकृया बढेपछि उजुरी दिएकी हुन् ।
तर, नायिका पोख्रेलले मिडियामा भने उनलाई छविको २ वटा श्रीमती भएको मात्रै जानकारी रहेको बताएकी थिइन् । यसको मतलब उनलाई हेमा ओझाको बारेमा केही थाहा नभएको भन्ने हो ।
यसो हो भने उनी हेमाको फेसबुकमा कसरी जोडीन पुगिनु ? हेमाको फेसबुकमा उनी र छविकी दोश्राी श्रीमती गिताञ्जलीका छोरा साकार ओझा साथी छन् ।शिल्पाले आफुलाई पहिलो श्रीमती बारे थाहा नहुनु भनेको हेमाको बारे थाहा नहुनु हो ।
तर, पनि उनको फेसबुकमा भने हेमा साथी छिन् । कतै शिल्पाले झुट त बोलिनन् ?
प्रकाशित मिति ६ श्रावण २०७६, सोमबार १४:४९